Washington City Offices tarira - China Washington City Offices Wuqiang County Huili
Washington City Offices hwindo sikirini
Washington City Offices yepasi
Self-namira Washington City Offices
PVC bemhapemha Washington City Offices rwebhuruu
Washington City Offices rwebhuruu
Washington City Offices tarira
Washington City Offices Chopped Strand Mat
chibatiso hwindo sikirini
Washington City Offices yakananga tarira zvinenge zvakazara ine silane nezveBhaibheri sizing uye inowirirana unsaturated nebwe, vinyl nebwe, uye epoxy nebwe. Richishandiswa kugadzira gratings, tsvimbo siyana uye profiles.
1. Minimal fuzz panguva processing
2. Fast nyoro-panze uye nyoro-kuburikidza
3. Good internet akapararira uye yakakwirira rinoumba zvemaziso ehupfumi
4. tambo vari nyore akasvinudzwa kuti afumure filaments dzavo shoma kushanda
5. High simba
6. Kunyange payout makakatanwa
7. zvazvingava Low akaoma abrasion pamusoro creel kuonana pfungwa
hunoshandiswa Main zvinosanganisira zvaAtemisi senyere pamusoro diameters siyana, zvikwepa mukuru-kumanikidzwa kuti peturu kuchinja, kumanikidzwa midziyo, kuchengetwa dzehondo, uye, kuputira zvinhu zvakadai utility pematanda uye kuputira chubhu FRP.
Washington City Offices tarira - zvigadzirwa ava kumagumo akawanda pamusoro Washington City Offices kuramba (splice vakasununguka) filament yakapfava kupatsanurwa mugomo refu vachikwanisa simbi Gwenzi. Specialty girazi vavabatsire vari zvakaoma zvakasikwa uye zvinoda chaiwo kugadzira zvinhu. Chigadzirwa ichi inowanikwa fibers akadai KEVLAR nezvimwe ARAMIDS. Kushandiswa kwavo chikuru chiri motokari kuvesa waya sezvo panozogadzirika zvokunyama uye telecommunication netambo. Washington City Offices vavabatsire kuuya waya & waya musika high quality, matunhu kuita uye mutengo-inobudirira.
Washington City Offices tarira tinonyanya regirazi faibha imwe mhando kuti anogona kuramba kupera alkaline zvinhu zvakadai simende. Inogona kushandiswa kusimbisa simende (GRC), gypsum nezvimwe inorganic uye Organic zvokuvakisa, uye zviri rakanakira simbi uye asbestos mu vasiri mutoro-kubereka simende yenhengo zvinotsiva. Product waivako maererano National uye maindasitiri mitemo, alkali kurwisa kundosangana United States PCI (Prestressed Concrete Society) uye International GRC Association zvinodiwa.
Direct tarira inowirirana thermosetting Inogadzirwa nemasiridzi anobuda mumiti, akadai unsaturated polyester, vinyl Ester, epoxy uye phenolic Inogadzirwa nemasiridzi anobuda mumiti.
Direct tarira rinoshandiswa chaizvo filament widing uye Pultrusion, unobereka dzakarukwa tarira uye micheka multiaxial. Chikumbiro vane FRP pombi, kumanikidzwa midziyo, grille, zvemakemikari dzehondo uye zvichingodaro.